Trano atsimo sy avaratra… | NewsMada
Trano atsimo sy avaratra…
Par Taratra sur 24/03/2020
Amin’ny fotoan-tsarotra tahaka izao no ahatsapana fa Malagasy ny Malagasy ! Mitambolona ireo ampaham-piainana fahiny. Iray amin’ireny ny fampiasana ny raokandro na ireo hazo hoenti-miaro sy mamongotra aretina isan-karazany. « Alaivo ny romba, ampio kininimpotsy, asio mandravasarotra kely », hoy ny feo re etsy sy eroa. Tsy zava-baovao amin’ny Malagasy ireo satria misy sy maniry eto amin’ny taniny avokoa sady hainy rahateo ny mampiasana azy.
Nitodika indray amin’Andriamanitra ny Malagasy satria tsapany fa marefo sy bitika ihany izy manoloana ny ady atrehiny. Tsy zava-baovao ho an’ny Malagasy ihany koa ny fanankinana ny fiainana amin’Andriamanitra fa efa niainany hatry ny ela. Mety tsy mitovy amin’ny fandraisana sy fahalalana an’Andriamanitra Andriananahary tamin’izany fotoana ny tazana ankehitriny fa na izany aza, ilay fitodihana any amin’Ilay Mpahary no zary ivo mampifandray sy mampifamatotra ny fahalalana (fahiny) sy ny finoana (ankehitriny) eto. Endrika voalohany asehon-dRamalagasy io !
… Fa, endrika hafa maneho izay « maha Malagasy » izay koa, angamba, ilay asehon’ny sasany : tia kely, mpanararaotra ny fahorian’ny hafa, mpanao tsindrio fa lavo, tia tena, mpisoloky, sns. Mbola ny vanim-potoana tahaka izao ihany koa no mampisongadina sy ahatsapana fa Malagasy ny Malagasy. Nivadika hatramin’ilay fahendrena tsy ananan’ny firenen-kafa ka nanjary « Trano atsimo sy avaratra, izay tsy misy olona robaina ». Ao anatin’ny ora vitsy, nisondrotra avo roa, telo heny na maherin’izay aza ny vidin’entana, ny saran-dalana, sns.. Izay Ramalagasy izay !
Diniho tsara fa samy manana ny mampiavaka azy ireo tranga roa ireo. Ny vanim-potoana no nametraka tsikelikely ireo fahasamihafana ireo. Izany hoe, nitondra zava-baovao ny fotoana naha Malagasy fahiny miampita aty amin’ny maha Malagasy ankehitriny. Raha ireo ny fiovana nisy, afaka valiana tsara izany ny fanontanina hoe : mbola Malagasy ve ny Malagasy ?
… Lava dia lava ny mety ho valin’io fanontaniana io ka tsy ho vita ato anatin’ny « Indraim-bava » ka aleo efain’ny saina tia mamakafaka !